စာအိတ်ဖိတ်ကြားလွှာ Card ကို | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-bestbusinessprinting.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စာအိတ်ဖိတ်ကြားလွှာ Card ကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 10-2
အေးသတ္တုပါး, စိုင်းကော်နဲ့အလွှာမှအအေးသတ္တုပါးလွှဲပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်.အစဉ်အလာ flexographic သို့မဟုတ် offset ပုံနှိပ်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း,ယင်းသတ္တုပါးနှင့်ပုံနှိပ်စက်တစ်လိုင်းအတွက်ကုသနေကြ.လက်ရှိအချိန်မှာ,သူတို့ထဲကအများစုဟာချမ်းကိုသုံးပါ-ချမ်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ပူပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း-ပူပြင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို.အေး-ပူ, ငွေကိုနောက်ခံအရောင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်လေးအရောင်များကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ပုံနှိပ်ခြင်း stack တစ်ခုချမ်းသာအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်.ရိုးရာပူသတ္တုပါးတံဆိပ်ထုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,အအေးသံအားသာချက်များ၏အတော်လေးနံပါတ်ရှိပါတယ်,အချိန်အပါအဝင်ချွေတာ,စွမ်းအင်ချွေတာရေး,သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပိုပြီးအရောင်အပြောင်းအလဲများ.တံဆိပ်များနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများထုတ်ကုန်အပေါ်န့များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ကုန်တန်ဖိုးကို၏ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိ-ကဆက်ပြောသည်.ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်-အတုထုပ်ပိုး.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestbusinessprinting.com/my/envelope-invitation-card.html
စာအိတ်ဖိတ်ကြားလွှာ Card ကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် စာအိတ်ဖိတ်ကြားလွှာ Card ကို ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 1,175 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestbusinessprinting.com